चार किसान संगठनको भर्चुअल अन्तरक्रिया : बृहत् आन्दोलनको आँधिबेहरी सृष्टि गर्नुपर्नेमा वक्ताहरुको जोड - MOOLBATO.COM
चार किसान संगठनको भर्चुअल अन्तरक्रिया : बृहत् आन्दोलनको आँधिबेहरी सृष्टि गर्नुपर्नेमा वक्ताहरुको जोड
२०७८ असार १६ २०:४३
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान यूनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान सङ्घको आयोजनामा गरिएको अन्तक्र्रियामा वक्ताहरुले किसानहरुले भोग्नुु परेका तमाम समस्या समाधानका लागि बृहत् संयुक्त आन्दोलनको आँधिबेहरी सृष्टि गर्नुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको सुरुमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले चार किसान सङ्गठनको तर्फबाट आधारपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तत्पश्चात् त्यसमाथि विभिन्न संगठनका नेताहरु र विज्ञहरुले क्रमशः आ–आफ्नो धारणासहितको मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले व्यापारघाटाको नाममा नदीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने अवधारणा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै पालमा आएको, तर अहिले मात्रै बजेटमा समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनालाई गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भारतीय स्वार्थमा आएको बताइसकेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले किसान र मजदुरहरुका समस्याहरुको वास्तविक समाधानका लागि सबै एकताबद्ध भएर आवाज उठाउन सुझाब दिनुभयो ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी) का महासचिव धनेश्वर पोखरेलले सरकारले सरकारी अनुदान आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै बाँडेको बताउनुभयो । उहाँले दक्षिणी सिमानामा रहेका किसानको समस्याबारे सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाउनुभयो । अब किसानका समस्याहरु सम्बोधन गर्न राज्यलाई बाध्य बनाउनका निम्ति आन्दोलनको विकल्प नरहेको र अब बृहत् रुपमा आन्दोलनको आँधिबेहरी सृष्टि गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (क्रान्तिकारी–केन्द्र) का चित्रबहादुर श्रेष्ठले राज्यकै कृषिसम्बन्धी गैरजिम्मेवार नीतिका कारणले किसानका सामु चुनौती थपिएको बताउनुभयो । किसानले मल, बिउ, किटनासक औषधि समयमै नपाएको प्रसङ्ग उठाउँदै यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले चार किसान संगठनहरुको मोर्चालाई अझ वृहत् बनाएर किसान आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।